Huawei P10 Plus အားဖုန်းမှ (6GB RAM ကို, ROM ကို 64GB, 5.5 လက်မ) ၏စျေးနှုန်း ...
အစ » ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်းဖုန်းများ » စမတ်ဖုန်းများ » Huawei P10 Plus အားဖုန်းမှ (6GB RAM ကို, ROM ကို 64GB, 5.5 လက်မ)
အစမိုဘိုင်းဖုန်းများစမတ်ဖုန်းများHuawei P10 Plus အားဖုန်းမှ (6GB RAM ကို, ROM ကို 64GB, 5.5 လက်မ)
လိုချင်သောစာရင်းသို့ထည့်သွင်းပါလိုချင်သောစာရင်းမှ Addedလိုချင်သောစာရင်းထဲကနေဖယ်ရှား -1
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်ဇွန်လ 2019 17 9: 03
Huawei P10 Plus အား VKY-AL00 4G စမတ်ဖုန်း 5.5 လက်မ 6GB RAM ကို + 64GB ROMSupport OTA Update ကို
Huawei P10 Plus အား 4G phablet ကို Global ဗားရှင်း
[အီတလီစတော့အိတ်] Huawei က P10 Plus အား 5.5 လက်မ WQHD မျက်နှာပြင်စမတ်ဖုန်း 6GB 128GB Kirin 960 Octa Core 20.0MP ...
Huawei P10 Plus အား VKY-AL00, 6GB + 64GB, 6GB + 128GB,6+ 256GB optional ကို, ဒါဟာဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းပါးလွှာသောဒီဇိုင်းအတွက်မိတ်ဆက်ပြသဆန်းသစ်ဟာ့ဒ်ဝဲအဆင့်မြှင့်တင်တဲ့အရေအတွက်ကပါရှိပါတယ်။ စုံလင်သောအညီရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာစတိုင်နှင့်အတူပြောင်းလဲနေသောဒီဇိုင်းပေါင်းစပ်ဒါကလာမယ့်မျိုးဆက်စမတ် device ကိုကိုင်ယူပါ။ ယင်းကျယ်ပြန့်မျက်နှာပြင်-to-ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစား featuring, Huawei က P10 ဧကန်အမှန်အက၎င်း၏ကြော့ ID ကိုဒီဇိုင်းနှင့်သတ္တု bezel အားဖြင့်သင်တို့ကိုအထင်ကြီးပါလိမ့်မယ်။ တစ် 5.5 2K လက်မ screen နဲ့တစ်ကျယ်ပြန့်အရောင်အစအဆုံးအကုန်နှင့်အတူအားလုံးပါးလျဘောင်တပ်ဆင်အသုံးပြုရန်, ကအားလုံးကိုတဦးတည်းနူးညံ့သိမ်မွေ့သောကိုလက်စသတ်လွိုင်းဘောင်ထဲမှာသင်က သာ. ကွီးမွတျအသေးစိတ်ပေးပါ။ 12 + 20MP နောက်ကျောကို dual camera ကိုသင်တိုင်းကိုဗီဒီယိုသို့မဟုတ်ဓါတ်ပုံထဲမှာမွငျနိုငျအရည်အသွေးမြင့်ပုံရိပ်တွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်ဘယ်အသစ်တစ်ခုနှင့်အတူစိတ်ကူးနိုင်ပါတယ်ဘာမှကိုဖမ်းယူကြကုန်အံ့။ တကယ် Huawei အရည်အသွေး, သင်တို့အဘို့အကောင်းတစ်ဦးရွေးချယ်မှု။
[New Look ၏ 6.98mm က Ultra ထူးအိမ်သင်စတိုင်]
လက်ရာမြောက်သောလက်ရာ, အလင်းနှင့်ခက်ခဲတဲ့ချောမွေ့နှင့်ပျော့ပျောင်းထိတွေ့, ပရီမီယံခံစားမှု။
[5.5 "One ကိုလက် 2K Display ကိုထိန်းချုပ်ရေး]
5.5 * 2560p resolution ကိုမြင့်မားအလင်းထုတ်လွှတ်နိုင်စွမ်းနှင့်အရောင်ရွှဲနှင့်အတူ 1440 "မျက်နှာပြင်,
, Multi-အမှတ် capacitive touch screen, ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအရောင်နဲ့ natrual အတော်လေးထိခိုက်မခံတဲ့ especilally မျက်စိကာကွယ်မှုများအတွက်။
[နှစ်လုံးကိုလည်း Kirin 960 Octacore] [အန်းဒရွိုက် eCPA 7.0 +]
8-Core, RAM ကို + 6GB 64 / 128 / 256GB ROM ကိုမလုပ်မဖြစ်, ဒေတာအပြောင်းအလဲနဲ့မြင့်မားထိရောက်မှု။
များပြားလှသောစမတ် app များကိုထောက်ပံ့, လုံခြုံပြီးတည်ငြိမ်။
[12 + 20MP သို့ပြန်သွားရန် Dual-ကင်မရာများကိုအကောင်းဆုံးခဏ Capture]
နောက်ကျော 12 + 20MP ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကင်မရာကို, ကင်မရာများ၏ရှေ့မှောက်၌ 8MP အံ့သြဖွယ်ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း flash LED ။
[လက်ဗွေသော့ဖွင့ကို Safe နှင့်တိကျမှန်ကန်သော]
Personalised လက်ဗွေရာ, အမဲဆီနှင့်ချွေးများနှောင့်အယှက်အောင်မြင်သောအမြန်တုံ့ပြန်မှုသော့ဖွင့်, သင်၏ privacy ကိုစောင့်ရှောက်။
[Lightning မြန်ကွန်ယက်] [3750mAh ဘက်ထရီ]
4G FDD-LTE ကို, WCDMA 3G, 2G ဂျီအက်စ်အမ်နီးပါးအပြည့်အဝကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလွှမ်းခြုံ။
ပုံစံ Huawei P10 Plus အား (VKY-AL00)
အရောင် ရွှေ, အနက်ရောင်, နှင်းဆီရွှေ + အပြာရောင်, အဖြူရောင်, အစိမ်းရောင် (+ 6GB 64GB, 6GB + 128GB,6+ 256GB ရွေးချယ်နိုင်)
*ပြောင်လက်တောက်ပသောအမဲရောင်: သာလျှင်6+ 128GB ROM ကို။
ပစ္စည်း ပလပ်စတစ်, သတ္တု
OS Android အတွက် 5.1 သဟဇာတ ECPA 7.0,(စစ်ဆင်ရေးစနစ်အခြိနျမှနျမှ update လုပ်နိုင်ပါစေ)
CPU ကို / GPU ကို Kirin960 Octacore စမတ် + core ကို i6,4* Cortex A73 2.4GHz4+ * Cortex A53 1.8GHz
ရွမ် 64 / 128 / 256GB မလုပ်မဖြစ်, မိုက်ခရို TF ကဒ် 256GB ကိုထောကျပံ့
* ကြောင့် CPU ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့ပါဝါအတွက်ကန့်သတ်ခြင်းငှါ၎င်း, operating system နဲ့ Pre-installed applications များအသုံးပြုသောမှတ်ဉာဏ်, အအမည်ခံမှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်ထက်အသုံးပြုသူများမရရှိနိုင်အမှန်တကယ်အာကာသမနည်းပါလိမ့်မယ်။ အမှန်တကယ် memory space ကိုလျှောက်လွှာနောက်ဆုံးသတင်းများ, အသုံးပြုသူစစ်ဆင်ရေးနှင့်အခြားဆက်စပ်အချက်များနှင့်အတူပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။
display အရွယ်အစား 5.5 "
ပုံစံ မျက်နှာပြင် TFT 1500: 1
display နည်းစနစ် Muti-point touch နဲ့, 96% NTSC
resolution 2K 2560 * 1440Pixels
ရှေ့ကင်မရာ Pixels 8MP
နောက်ကျောကင်မရာ 12MP + 20MP
ပုံစံ 2G / 3G / 4G
TD-LTE ကို: Band 38 / 39 / 40 / 41
မှတ်ချက်: မျက်စိကန်း plug ကိုထောကျပံ့ပေး, SIM1 နှင့် SIM2 မပါဘဲအဓိကကဒ်သို့မဟုတ်ဒုကဒ်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်
secondary ကဒ် (သာ voice)
ဂျီအက်စ်အမ်: 850 / 900 / 1800 / 1900MHz
SIM ကဒ်ကတ်အရေအတွက် dual SIM ကဒ်များ, dual standby
SIM ကဒ်ကဒ်အမျိုးအစား nano SIM NanoSIM + TF ကဒ်
ဝိုင်ဖိုင် 802.11 /b/ g / n / ac 2.4GHz / 5GHz
BT ဗားရှင်း 4.2
စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့် 3750mAh (non-ဖြုတ်ဘက်ထရီ)
* ပုံမှန်တန်ဖိုး။ အမှန်တကယ်စွမ်းရည်အနည်းငယ်ကွဲပြားလိမ့်မည်။
ဤသည်အမည်ခံစွမ်းရည်ဘက်ထရီစွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်။ ACTUAL တစ်ခုချင်းစီကိုတစ်ဦးချင်းစီထုတ်ကုန်များအတွက်ဘက်ထရီစွမ်းရည်: အနည်းငယ်အမည်ခံဘက်ထရီ capacity.Talk အချိန်အထက်တွင်သို့မဟုတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်နိုင်သည်နှင့် Standby အချိန်အမှန်တကယ်အခွအေနေကို အသုံးပြု. အပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။
ဘာသာစုံ အင်္ဂလိပ်, ပြင်သစ်, ရုရှား, ဂျာမန်, စပိန်, အီတလီ, ဂျပန်, စသည်တို့ကို
GPS စနစ် ဂျီပီအက်စ် / AGPS / GLONASS
sensor accelerometer, Proximity Sensor, Ambient အလင်းအာရုံခံကိရိယာ, ဒစ်ဂျစ်တယ်သံလိုက်အိမ်မြှောင်
image ကို PNG, JPEG, GIF, BMP
ဗီဒီယို 3GP, MP4, WMV, RM, RMVB, ASF
audio MP3, လယ်, AMR, AWB, 3GP, MP4, M4A, AAC, WAV, OGG, FLAC အ
အခွားသောအင်္ဂါရပ်များ ebook, ရေဒီယိုကို tuner, Messaging ကို, နောက်ခံများ, ပြက္ခဒိန်, Calculator ကို, နာရီ, etc
ကုန်ပစ္စည်း Size ကို approx ။ 15.3 * 7.4 * 0.68cm /6* 2.9 * 0.3in
ကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန် approx ။ 165g / 5.7oz (ဘက်ထရီမပါဝင်)
package Size ကို approx ။ 17 * 10 * 6cm / 6.6 * 3.9 * 2.34in
အထုပ်အလေးချိန် approx ။ 520g / 18.2oz
item အရောင်ကွဲပြားခြားနားသောပစ်ခတ်မှုအလင်းနှင့်မော်နီတာ display ကိုကြောင့်အနည်းငယ်ထစ်အငေါ့ပြသလိမ့်မည်။
မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: တိကျတဲ့: အသိပေးစာမပါဘဲပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်, ရုပ်ပုံများသာပုံဥပမာကိုရည်ရွယ်ချက်အဘို့ဖြစ်ကြ၏။
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား, ကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန်, သာသီအိုရီတန်ဖိုးများနှင့်ဆက်စပ်သောသတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိပါတယ်။ မေလကြားမှာအမှန်တကယ်တိုင်းတာတစ်ဦးချင်းစီထုတ်ကုန်တွေပြောင်းပါ။
1 * ဆဲလ်ဖုန်း
1 * ပါဝါအဒက်တာ
1 * USB ကြိုး
1 * 3.5mm နားကြပ်
1 * SIM ကိုသော့ဖွ Pin
1 * အသုံးပြုသူလက်စွဲ
Huawei က P10 | P10 Plus အားပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Huawei က P10 Plus အားသုံးသပ်ချက် -4လအကြာ - Revisited
HUAWEI P10 Plus telefonas (6GB RAM, 64GB ROM, 5.5 coliai) Videos
ဒီထုတ်ကုန် Huawei P10 Plus အားဖုန်းမှ (6GB RAM ကို, ROM ကို 64GB, 5.5 လက်မ) ဘယ်လောက်ရှိသလဲမှပထမဦးဆုံးဖြစ် ပြန်ကြားချက် Cancel
Xiaomi က Mi ရောသမ2ဖုန်းမှ (6GB RAM ကို 64 / 128 / 256GB ROM ကို6လက်မ)